Umhloli weCSV: Sebenza ngeefayile ezinkulu zeCSV | Martech Zone
Iifayile ze-CSV zisisiseko kwaye zihlala zezona ziphantsi njengezona zinto ziphantsi ekungeniseni nasekuthumeleni idatha kuyo nayiphi na inkqubo. Sisebenza nomthengi ngoku onedathabheyisi enkulu kakhulu yoqhakamshelwano (ngaphezulu kwe-5 yezigidi zeerekhodi) kwaye kufuneka sihluze, sibuze, kwaye sithumele icandelo leenkcukacha.
Yintoni ifayile ye-CSV?
A amaxabiso ahlulelwe ikoma ifayile yifayile yokubhaliweyo emiselweyo esebenzisa ikoma ukwahlula amaxabiso. Umgca ngamnye wefayile yirekhodi yedatha. Ingxelo nganye inendawo enye okanye ezingaphezulu, ezahlulwe ngoomafana. Ukusetyenziswa kwekoma njengomahluli wentsimi ngumthombo wegama kule fomathi yefayile.
Izixhobo zeDesktop ezinje ngeMicrosoft Excel kunye noGoogle AmaSpredishithi anezithintelo zedatha.
Microsoft Excel izakungenisa iiseti zedatha ukuya kuthi ga kwisigidi esi-1 semigca kunye neekholamu ezingenamda kwispredishithi. Ukuba uzama ukungenisa ngaphezulu koko, i-Excel ibonisa isilumkiso esithi idatha yakho incitshisiwe.
Amanani e-Apple izakungenisa iiseti zedatha ukuya kuthi ga kwisigidi esi-1 semigca kunye neekholamu ezili-1,000 XNUMX kwispredishithi. Ukuba uzama ukungenisa ngaphezulu koko, iinombolo zibonisa isilumkiso esithi idatha yakho incitshisiwe.
AmaSpredishithi eGoogle Ukungenisa iiseti zedatha ukuya kuthi ga kwiiseli ezingama-400,000, ubuninzi beekholamu ezingama-256 kwiphepha ngalinye, ukuya kuthi ga kwi-250 MB.
Ke, ukuba usebenza nefayile enkulu kakhulu, kuya kufuneka ungenise idatha kwindawo yogcino lwedatha endaweni yoko. Oko kufuna iqonga ledatha kunye nesixhobo sokubuza ukwahlula idatha. Ukuba awufuni ukufunda ulwimi lokubuza kunye neqonga elitsha… kukho enye indlela!
Umhloli weCSV sisixhobo esilula kwi-intanethi esenza ukuba ungenise ngaphakathi, ubuze, icandelo, kunye nokuthumela idatha ngaphandle. Inguqulelo yasimahla ikuvumela ukuba usebenze kunye neziqendu ezi-5 zokuqala okwethutyana. Ezinye iinguqulelo zikuvumela ukuba ugcine iiseti zedatha ukuya kuthi ga kwizigidi ezingama-20 ezinokusebenza ngokulula.
Ndikwazile ukungenisa ngaphezulu kwe-5 yezigidi zeerekhodi namhlanje ngaphakathi kwemizuzu nje, ndibuza idatha ngokulula, kwaye ndikhuphela ngaphandle iirekhodi endizifunayo. Isixhobo sasebenza ngokungenasiphako!
Iimpawu zeCSV zokuHlola zibandakanya
Idatha enkulu (okanye yoSayizi oQhelekileyo) -Iimiqolo embalwa okanye imigca embalwa yezigidi, i-CSV Explorer yenza ukuvula nokuhlalutya iifayile ezinkulu ze-CSV ngokukhawuleza nangokulula.
Ukuqhatha -I-CSV Explorer kulula ukuyisebenzisa. Ngokucofa nje okumbalwa, ukucoca, ukukhangela, kunye nokusebenzisa idatha ukufumana inaliti kwindawo yokucheba okanye ukufumana umfanekiso omkhulu.
Ukuthumela ngaphandle -I-CSV Explorer yenza ukuba ubuze kwaye uthumele ngaphandle iifayile-nokuba uphicotha iifayile ngenani leerekhodi ongathanda kuzo nganye.
Jonga kwaye uqhagamshele Idatha yendawo, gcina iigrafu kwintetho, okanye uthumele iziphumo kwi-Excel ukuze uhlalutye ngakumbi.
tags: ixabiso lokwahlula ikomaCSVcsv umhloliIinkcukachaphambiliAmaSpredishithi eGoogleiiseti zedatha ezinkulu